I-BWA011-DS023-LT-10PD - Isikrini Esithinta I-Port Docking Digital Evidence Management System - Izixazululo ze-OMG
I-Software Evidence Management System Yedijithali
Isimo Sokulanda Okubonakalayo: I-Docking Station ibonisa isimo sokulanda idatha, inani lamafayela alandiwe, nesikhathi esilinganisiwe sokulanda kusuka kukhamera ngayinye egqamile yomzimba exhunyiwe.
Ukuhlanzwa Kwemininingwane Yekhamera: I-Docking Station ihlanza ngokuzenzakalela yonke idatha erekhodiwe kwi-BWC exhunyiwe ngemuva kokuthi yonke idatha ilandwe kusuka kudivayisi.
Qalisa kabusha ukulanda: Uma ukulanda kusuka ku-BWC kuya esikhumulweni semikhumbi kuphazamisekile, isiteshi sokumisa amadokodo sizoqala kabusha ukulanda lapho sigcine khona lapho kugcinwa khona ikhamera.
Ingosi: Uhlelo lusebenzisa ukwakhiwa kwesiphequluli / iseva ukuhlangabezana nezidingo zama-ejensi ahlukile. Yonke idatha elandiwe iyatholakala kusuka esiteshini sedokhi noma i-PC yendawo yenethiwekhi nge-Web Browser.
Abasebenzisi namaqembu: Umsebenzisi ngamunye unikezwa izimvume ezingokwezifiso zokufinyelela, ukubuka, ukulanda, ukubika, nokususa idatha elayishiwe.
Imininingwane Yendaba: Izisebenzi ezigunyaziwe zingangeza imininingwane ebalulekile yamacala, zinamathisele amadokhumenti angeziwe namanye amafayela aphathelene necala elinemininingwane eqoshiwe.
Izigaba Zezehlakalo Ngokwezifiso: Izigaba Zesimo Sokwezifiso zengezwa ohlelweni ukuhlangabezana nemithetho nezinqubomgomo ezihlukile zama-ejensi.
Ukumaka ividiyo: Idatha elandiwe ingamakwa.
Idatha ekhiyiwe: Idatha ezwelayo elandiwe ingakhiywa ukuze kugcinwe abasebenzisi abangagunyaziwe ekufinyeleleni, umnikazi wedatha ufakiwe.
Idatha evikelwe: Idatha ebalulekile ingavikelwa ekususweni okuzenzakalelayo noma mathupha.
Ucwaningo Olujulile: Thola kalula idatha oyifunayo eqoshiwe usebenzisa imingcele yokusesha eyodwa noma ngobuningi.
Imibiko Yezibalo: Abasebenzisi abagunyaziwe bangabuyisa kabusha i-repot yedatha yezehlakalo zezibalo zebanga ledethi elishiwo.
Qedela Inqola Yokuhlola: Landela ngomkhondo isenzo ngasinye esenziwa yizikhulu nabasebenzisi kungaba esiteshini sokumisa izikebhe noma ngeWeb Portal.
Isipele sedatha: Idatha elandiwe ingenziwa isipele kumaseva wefayela acacisiwe ngenethiwekhi (i-NAS). Umlawuli angakha izinqubomgomo zangokwezifiso zohlelo lokugcina kuphela idatha ebalulekile ku-NAS noma kumaseva wokugcina amaningi.
Ukuqapha Kwesistimu Yesikhathi Sangempela: Imininingwane yesimo seDocking Station kufaka phakathi isitoreji sangaphakathi, isimo sediski, isimo esiku-inthanethi, kanye nempilo yedatha kuhlolwe ngesikhathi sangempela.
Ukuvumelanisa Isikhathi: Isiteshi sokumisa sibuyekeza ngokuzenzakalela isikhathi seKhamera Yomzimba Worn lapho amadivayisi axhunyiwe.
Isitoreji Sendawo Esingahlukeki: Phatha kalula futhi ugcine idatha endaweni yangakini futhi ususe imali ekhokhwayo yokugcina inyanga nenyanga. Isitoreji sesistimu singanwetshwa ngaphakathi nangaphandle.
Isoftware Yesistimu Isistimu esebenzayo Win 10
Isoftware Yokutholwa Uhlelo Lokulawulwa Kokulawulwa Kobufakazi Bomakhalekhukhwini
Ukucushwa kwe-Hardware Izingxenye zokubonisa I-LCD engu-10.1-intshi, ukulungiswa ngokomzimba 1280 x 800
Thinta Izingxenye Isikrini sokuthinta esinamaphoyinti amaningi
I-Chipset Main I-Dual-core CPU Intel chipset enenketho yamanye ama-processor womndeni we-Intel
Imemori Amandla I-4G DDR 1600/1333/1066 MHz (ngokuzithandela 8 kuya ku-16G).
Isistimu Hard Drive I-60G SSD
Amandla okugcina Ongakukhetha 1T, 2,4T, 8T, 12T, 16T isitoreji umthamo.
Isixhumanisi Sokutholwa IMini / Micro / uhlobo C-USB luza ngokujwayelekile ngo-8 (ongakukhetha okungu-10)
Sebenzisa Izici Ukuphathwa Kokutholwa Ukuphathwa kokubopha okubhaliwe kwamarekhodi
Isekela ukudluliswa okunganqamuki kwenqubo yokutholwa
Inqubekela phambili yokutholwa nesimo sokushaja siboniswa ngamandla
Idivayisi yokuthola ifana nesimo sokubonisa kwesikrini ngamunye ngamunye
Inani lamadivayisi aqoqwe ngokuzenzekelayo futhi ngasikhathi sinye lingenziwa ngezifiso
Imithetho yesitifiketi ehambisana nomkhakha ojwayelekile wezimboni zokuphepha zomphakathi
Ukucutshungulwa kwedatha Ifayela levidiyo alinayo ikhwalithi yesithombe ecindezelwe yoqobo
Ukuhlukaniswa okuzenzakalelayo (kuya ngohlobo lwefayela, ukulungiswa noma usuku)
Layisha ngokuzenzakalela kuseva ecacisiwe
Layisha inqubomgomo okulungisekayo (isikhathi, ikheli lendawo oya kuyo, uhlobo lwefayela, umkhawulokudonsa wenethiwekhi, njll.)
Lapho irekhoda ihlolwa ngokuzenzakalela, isimo sokuqedwa kokutholwa siqinisekiswa ngokuzenzakalela bese idatha iyakhishwa ngokuzenzekelayo
Ukuphathwa kwesitoreji Ukuphathwa kwenqubomgomo yesitoreji (indlela yokugcina, uhlobo lwefayela lesitoreji, indlela yokuminyanisa, njll.)
Ukuphathwa kwesikhala sokugcina (ukuhlanza, ukuxwayisa kusenesikhathi, ukunweba, ukwenza isipele, njll.)
Isimo sesitoreji siyakhonjiswa
I-Database yenziwe isipele njalo
Ukulanda ubufakazi obuhanjisiwe, buka
Data Security Abasebenzisi abangagunyaziwe abanamalungelo wokusebenza kwedatha
Ukuvumelanisa idatha Izindlela ezimbili zokuvumelanisa i-database iphutha + indlela enokuxhumana okusebenzayo nokwenziwa ngeplatifomu yokuphatha
Ukuphathwa Kwamalungelo Izimvume ezingenamkhawulo ze-hierarchical zilawulwa kabusha
Ukuxhumana Kwangaphakathi Amathuluzi wokuthumela imiyalezo osheshayo wewebhu
Ucwaningo Lobufakazi Ubufakazi obubalulekile buyadluliselwa ukwaba isahlulelo
Ukuhlolwa Komsebenzi Ukuhlolwa kwabasebenzi, ukuhlolwa kweyunithi
Ukuphathwa Kwesiza Ukuphathwa kwesayithi lezindawo zokusebenza eziningi
Ukuphathwa Kwengena Ukungena ngemvume kwesenzo
Isixhumi Sokubamba Shintsha okhiye bemishini Izinkinobho zomzimba
Isizinda Senethiwekhi RJ45x1
Isizinda Sedatha I-USB-Umama
Izakhiwo Power I-ACIN: 100 kuya ku-240V; I-50 iye ku-60Hz ngaphezulu kokuvikelwa okucindezelweyo, ukuvikelwa ngaphezulu, ukuvikelwa kwamandla ngaphezulu, ukuvikelwa kwesikhashana
Ukusebenza Komswakama <90% yesikhathi
Usayizi X x 48 34 10 cm
Isisindo Esiphelele Somkhiqizo Mayelana ne-9kg
Umkhiqizo Isisindo Esiphelele Cishe i-10kg (ukupakisha ibhokisi).
Ukuqinisekisa ikhwalithi I-Shell Material Zonke izindlu zensimbi, anti-static, anti-magnetic, anti-solid field kagesi ukuphazamiseka
Isitifiketi Esiphoqelekile Ukuqinisekiswa okuyimpoqo kwemikhiqizo kagesi eChina (3C).
Amazinga Emvelo Zonke izingxenye nezesekeli zokupakisha zihambisana nezindinganiso zomhlaba jikelele zemvelo
Ukubuka okuphelele kwe-236 Ukubuka kwe-3 Namuhla